သင်မဟားတရားစားချင်နေတဲ့ အစားအစာက ပြောပြနိုင်တဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း - Lifestyle Myanmar
Home Food သင်မဟားတရားစားချင်နေတဲ့ အစားအစာက ပြောပြနိုင်တဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း
အစာစားလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်းက အဓိကအားဖြင့် selective နဲ့ non-selective ဆိုပြီး အမျိုးအစား (၂)မျိုးရှိပါတယ်။ Non-selective ကတော့ ဘာပဲစားရစားရ စားချင်တာ( ဆာလောင်မွတ်သိပ်တာ)ကို ဆိုလိုတာပါ။ selective ဆိုတာကတော့ အစားချင်ဆုံးအစားအစာ၊ မဖြစ်မနေ စားချင်နေတဲ့ စားချင်စိတ်မျိုးကို ပြောတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ စားချင်လိုတဲ့ ဆန္ဒများနှင့် ဒီပြင်းပြမှုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေက ဘာတွေလဲ?၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာကို တောင့်တဖို့ ဘာ့ကြောင့်ခက်ခဲနေရတာလဲ? ဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ချောကလက်ကို အရမ်းစားချင်နေရင်
ချောကလက်ကို စားလိုစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းက များသောအားဖြင့် မဂ္ဂနီစီယမ် မလုံလောက်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ချောကလက်အမည်း ၁၀၀ မှ ၄၀၀ ဂရမ်ကို နေ့တိုင်းစားပေးခြင်းက စိတ်ကျခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စူပါမားကတ်တွေနဲ့ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ သာမန်ချောကလက်တွေက ချောကလက်အမည်းလို အဖိုးမတန်ဘဲ သကြားဓါတ်အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီအစား ဗာဒံစေ့ကို စားပါ (သို့) အရမ်းစားချင်နေရင် ကိုကိုး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပါဝင်တဲ့ နို့မပါသော ချောကလက်တောင့်ကို စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရတယ်လို့ သင်ထင်ရင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
၂။ ဒိုးနပ်နှင့် အချိုတွေကို အရမ်းစားချင်နေရင်
အဝလွန်ခြင်းနှင့် အိပ်စက်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းအကြား သိသာထင်ရှားတဲ့ ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုကို ခက်ခဲစေယုံသာမက ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သကြားစားချင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်တဲ့ သကြားထုတ်ကုန်အများစုက သန့်စင်ထားတဲ့ သကြားတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီသကြားတွေကို စားသုံးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအစား- ဒိုးနက်၊ သကြားလုံးများနှင့် တခြားမုန့်တွေကို ချယ်ရီသီး၊ မက်မွန်သီး၊ ဖရဲသီး ကဲ့သို့သော အသီးတွေနဲ့ အစားထိုးပါ။ စပျစ်သီးခြောက်ကဲ့သို့သော အခြောက်လှန်းထားတဲ့ အသီးတွေက သင့်ကို စိတ်ကျေနပ်စေပါတယ်။
၃။ ချိစ့်ကို အရမ်းစားချင်နေရင်
ချိစ်ဟာ dopamine ဗုံးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် စားချင်စိတ်ပြင်းပြခြင်းနှင့် ရိုးရိုးစွဲလမ်းမှုအကြား ခြားနားချက်ကို သိဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ သင်ဟာ အဆီနည်းတဲ့ အစားအစာနှင့် ချိစ်ကို အရမ်းစားချင်နေရင် ဒါက ဗီတာမင် အေ (သို့) ဒီ ချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအစား -အဆီလုံးဝမပါဘဲ ဗီတာမင်တွေ ပါရှိတဲ့ nutritional yeast ကိုစားသုံးပေးပါ။
၄။ အာလူးကြော်တွေကို အရမ်းစားချင်နေရင်
အာလူးကြော်လိုမျိုး အငန်ကဲထားတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးချင်နေတယ်ဆိုရင် ဒါက အိုမီဂါ ၃၊ ကျန်းမာတဲ့အဆီနှင့် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။ အာလူးကြော်တွေက ဆားအရမ်းများတာကြောင့် ဆိုဒီယမ်အရမ်းမြင့်မားပါတယ်။ ဆိုဒီယမ်လိုအပ်တာထက် လျော့နည်းခြင်းက ချွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအစား- အာလူးကြော်အရမ်း စားချင်နေရင် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်တဲ့ ဆီတွေသုံးထားသော စီးပွားဖြစ်အာလူးကြော်တွေ စားမယ့်အစား သံလွင်ဆီသုံးပြီး ကြော်စားပါ။ ဆော်လမွန်၊ အခွံမာသီးနှင့် ထောပတ်သီးကို ပိုစားသုံးပေးပါ။ သင့်မှာ ဆိုဒီယမ်ချို့တဲ့တယ်လို့ ယူဆပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
၅။ ဆိုဒါ အရမ်းသောက်ချင်နေရင်
လူကြိုက်များတဲ့ ဆိုဒါများမှာ သင့်ရဲ့ အာသာပြင်းပြစိတ်ကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ကဖိန်းဓါတ်ပမာဏ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကဖိန်းဓါတ်များစွာပါဝင််တာကြောင့် သင့်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်လာစေပါတယ်။ ကိုလာ စွဲလမ်းခြင်းက သင့်အရိုးတွေမှာ ကယ်လစီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုလာဟာ ကယ်လစီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
အဲဒီအစား – ကဖိန်းဓါတ်မြင့်မားတဲ့ သောက်စရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆိုဒါတွေမှာ သကြားဓါတ်များစွာ ပါဝင်ပြီး ရေရှည်မှာ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ပန်းနေတယ်ဆိုရင် ချောကလက်အမည်းကို စားနိုင်သလို ကဖိန်းဓါတ်သိပ်မပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်ကို သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုအရ ရေခဲအရမ်းစားချင်နေတာက သံဓါတ်ချို့တဲ့နေတယ်လို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲကို တကျွတ်ကျွတ်ဝါးစားခြင်းက သံဓါတ်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကုသပေးပါတယ်။ ကော်ဖီသောက်သလိုပဲ စိတ်ဓါတ် နည်းနည်းတတ်ကြွစေနိုင်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါမှာ ဆိုဒါထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ ရေခဲတုံးကို တကျွတ်ကျွတ်ဝါးစားနေလျှင်တော့ မစိုးရိမ်သင့်ပါဘူး။
အဲဒီအစား ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သံဓါတ်ချို့တဲ့တယ်လို့ ထင်ရင် ပဲနင့် ဟင်းနုနွယ်ရွက် များများစားဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ဘာ့ကြောင့် မတပ်မက်ကြတာလဲ?
ပုံမှန်ဆာလောင်တာနှင့်မတူဘဲ အစားအသောက် တပ်မက်ခြင်းက စိတ်ပညာနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာ- ချောကလက်နှင့် သကြားစားခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ သာယာပျော်ရွင်မှုကို ချက်ချင်းဖြစ်စေတဲ့ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက သင့်အာရုံကို အလွန်အမင်း လှုံ့ဆော်ပေးလေ့မရှိပါဘူး။
Previous articleအလုပ်သေချာပေါက်ရစေဖို့အတွက် အင်တာဗျူးသွားမဖြေခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အချက်လေးတွေ
Next articleဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ Influencer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အချက် (၅) ချက်